» यसकारण पो मनाइने रहेछ ‘अप्रिलफुल’ दिवस
यसकारण पो मनाइने रहेछ ‘अप्रिलफुल’ दिवस
२०७५ चैत्र १८,सोमबार १५:०७
एजेन्सी । अप्रिल १ को दिन विश्वभरी ‘अप्रिलफुल दिवस’ मनाइन्छ । यो दिवसलाई पश्चिमी राष्ट्रहरुमा मनाइने गैरधार्मिक पर्वहरुमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय पर्व मानिन्छ ।
यो दिन बालबालिकाहरु अभिभावकलाई ‘प्र्याङ्क’ गरिरहेका हुन्छन् । सहकर्मीहरुले एकअर्कालाई उडाउने गर्छन् भने धेरैजसो पश्चिमी सञ्चार माध्यमहरुले पाठकलाई झुक्याउने खालका समाचार दिइरहेका हुन्छन् ।
तर यो पर्व कसरी मनाउन थालियो ? यो दिन यस्तो ठट्टा किन गरिन्छ ? र कसरी यो विश्वव्यापी परिघटनामा बदलियो बन्यो ?
जनवरीको साटो अप्रिलमा नयाँ वर्ष मनाउनेहरु ‘अप्रिल फिस’ १
दुर्घटनाबाट जीप चालकको मृत्यु
हेटौँडामा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु